UThinah ne-albhamu entsha ayiqophe bukhoma
UTHINAH Zungu uthe uyiqophe bukhoma i-albhamu yakhe ngoba ecelwe ngabantu Isithombe: SITHUNYELWE
FANELESIBONGE BENGU | December 5, 2018
UMCULI wowokholo, uThinah Zungu, uthe ufaka umfutho emsebenzini wakhe ukuze abe yinkakha ehlonishwayo emculweni ngomuso.
UThinah ukhiphe i-albhamu yakhe entsha iLive at Soweto Theatre ngesonto eledlule. Bese kunesikhathi agcina ukukhipha ngoba i-albhamu yakhe yokugcina, iThe Living Testimony, wayidedela ngoMashi 2016. Ngasekuqaleni konyaka ukhiphe ngokuhlanganyela noDumi Mkokstad i-albhamu ethi Ebeke Walunga uThixo.
“Sengizuze izinto eziningi empilweni kodwa azisho lutho ngoba ziyaphela. Engifuna ukukuzuza ukuhlonishwa umhlaba wonke ngoba lokho kuyosala abantu bangikhumbule ngako,” kusho uThinah.
Uthe useqalile ukusebenza ngokuzikhandla ukufeza iphupho lakhe ngoba usesabalala nangaphandle kwaKwaZulu-Natal.
“I-albhamu yami ngiyiqophe bukhoma eSoweto Theatre ngoJulayi. Kungokokuqala ukuthi ngiqophe bukhoma ngoba abantu bangicela ngemuva kokuthi ngenze UJesu Ufika Ekuseni noSipho Ngwenya. IJozi FM yayigubha usuku lwayo lokuzalwa ngase ngiyacela ukuthi ngiqophe,” kusho uThinah.
Uthe kule albhamu ucula ngesiZulu, isiNgisi, isiSotho, isiVenda nesiShona.
“Ngalokhu ngifuna ukulalelwa yibo bonke abantu ngoba ngokuzayo ngifuna ukuphinda ngiqophe bukhoma mhlawumbe emazweni angomakhelwane esengiqalile ukuwahambela njengaseSwatini naseZimbabwe,” kusho yena.
I-albhamu inezingoma ezingu-17 ezihlanganisa nezindala okubalwa iKwanqab’umusa, Kuthe Bekwazi, Nginguthandiwe nezinye. Upike uDumi Mkokstad noWanda Phiri.
“Kukhona ingoma ethi Sawubona Jesu abantu abayithandayo ngoba ishaya ngesigqi esisheshayo engingajwayele ukucula ngaso.”